Ukuhamba enqamula epaki ekwindla nge izingane ngaso sonke isikhathi bagcina yini ukulethe endlini ka ubhasikidi ngezipho ezahlukene imvelo: chestnut, acorns, Amahlumela owomile, Izigaxa, noma umane ngenxa sezimbali amahlamvu. Yilokho - okokusebenza ephelele womshini yezandla. Nezingane, ungakwazi ukwenza izinto ezithakazelisayo ezokwenza ukuhlobisa ikhaya lakho kuyoba ngonyaka kukukhumbuza athokoza ekwindla. Futhi cishe kuzo zonke esikoleni futhi enkulisa kukhona nemibukiso yezandla ezenziwe ngezinto ezingokwemvelo. Ngakho, uyoba workpiece. It uhlala kuphela ukucabanga ukuthi yini okufanele uyenze ekwindla Ukwakheka ngezandla zakhe. Lesi isihloko kanye kwembulwe kule athikili.
Chestnut kanye acorns - izintandokazi izingane
Autumn Ukwakheka izingane yemvelo impahla ngokuvamile uthanda ukwenza kusuka chestnut kanye acorns. Kusukela lezi zithelo bheka izibalo ezihlekisayo kakhulu abantu nezilwane. izingane Abaningana impela umane unamathisele la ngezinto zemvelo nezinye plasticine ngamunye. Izingane ezindadlana ingavunyelwa (ngaphansi kweso lomuntu omdala) ukusebenzisa usungulo. Bona ibhoboze izimbobo esithelweni, okuyinto ufakwa ukufana noma lokuvungula. Ngakolunye uhlangothi ufakwa komunye onsundu (isithelo), kanye yasibamba okuthembekile eyatholakala. Izithelo axhunyiwe ngendlela, agcinwe kahle futhi isikhathi eside. Ungakha yonke indaba ekwindla Ukwakheka ngezandla zakhe zalezizipho bemvelo, okusekelwe uhlobo oluthize inganekwane noma indaba yangempela.
Izimbali kanye amaqabunga - impahla evundile ukudala i-ikebana
It idlulisela umoya saturation imibala nombala amahlamvu ekwindla. Lokhu ubuhle ungaletha ekhaya lakho futhi uyigcine ngesimo we-ikebana. Ukuze wenze ekwindla Ukwakheka kusuka izimbali namaqabunga ngezandla zakho, uzodinga, eqinisweni, ukwenza leyo misebenzi zemvelo, Ababazi bakha kwesitsha, imbali imbiza (ngaphandle izimbobo), Floral Foam, Tape. Ikebana kuyashesha kakhulu. Ubhasikidi faka imbiza, isiponji ugcwala amanzi kuwo. Noma yimuphi wayefisa izimbali, amagatsha nge amajikijolo noma amahlamvu abeke lapho futhi. Uma CANT, ungakwazi ufaka umugqa labo lokudoba noma iribhoni mncane ukuba obhasikidi udonga. Lonke kweqembu, ungakwazi bamukele umnsalo ububanzi elikhanyayo. Basket ngokwayo Ungase futhi ukuhlobisa ubucwebe (ubuhlalu, kuze kudabuke umhlane, izimbali). Nsuku zonke, olufuthwe namalungiselelo amanzi imbali moisten isipanji kusuka ukuthambisa kungaba nge itjhubhu nje okudingekayo.
Zakhele eyakho izandla ekwindla yokwakheka namahlamvu omile
panel Floral futhi imidwebo, futhi ngamanye amagama - isicelo amaqabunga omisiwe, namuhla olufanele kakhulu Interiors design. Yenza into enjalo, futhi uzokwazi ukuba ngumnikazi. Oku-bahlanganise amahlamvu amahle, emacembeni ezimbali ezintekenteke, futhi ome nabo phakathi emakhasini encwadi ethile. Ngokulandelayo, substrate leyakhiwe ngemabhokisi obukhulu uya ukwakheka wayefisa herbarium impahla okulungiselelwe kanye ethe njo PVA glue. Ngemuva omiswe, imidwebo noma panel kufanele ibekwe uzimele, okuyinto ungakwazi futhi ukuhlobisa ngezinto zemvelo. Uma wayefisa, uzimele ingilazi engenziwa.
Autumn Ukwakheka, elingenziwanga ngezandla zabo, zihlale eliyingqayizivele futhi inimitable. Abakwazi kuphela ukuhlobisa ikhaya lakho, kodwa futhi isipho esikhulu abangane nezihlobo. Yakha ubuhle ubumnandi!
Amathiphu ozinikezele: isiketi ehlobo ngezandla zakhe
Indlela ukukhilosha kumbuthano? Yini odinga ukuyazi Wabasaqalayo?
Yezandla: izinyoni ngezandla zabo. Izingane yezandla
Izindlela ezimbili ukuhlobisa ibhodlela ngezandla zakhe
Kanjani ukushaya intuthu izindandatho?
Inqubo emfushane: nendlela ukudweba kwamafu
Papilloma: kuyini? Izizathu bese uyalikhipha
Zokupheka Easy izingane engu-12 ubudala kokuqala ukupheka
Indlela yokufaka isicelo semali mboleko ku-WebMoney?